Huami Amazfit Verge no famantaranandro vaovao an'i Xiaomi miaraka amin'ny NFC | Androidsis
Xiaomi dia tsy manana na inona na inona ao amin'ny katalaoginy, ary porofon'izy ireo ny famantaranandrony vaovao miaraka amin'ny NFC, sensor amin'ny tahan'ny fo ary andian-dahatsoratra hafa izay mahatonga azy io ho iray amin'ireo fitafiana manintona indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy.
Ilay fiambenana vaovao Xiaomi Huami Amazfit Verge no iantsoana azy. Eny, nataon'izy ireo sarotra tokoa ny mahatadidy izany rehefa te-haneho hevitra momba ny mampiavaka azy izahay, saingy izany tokoa, efa manana akanjo vaovao azo avy amin'ny marika sinoa malaza isika.
1 Miaraka amin'ny NFC handoa vola amin'ny sensor finday sy ny tahan'ny fo
2 Ny fepetra voafaritry ny Huami Amazfit Verge
3 Natokana hihazonana ny tonontsika ara-batana
Miaraka amin'ny NFC handoa vola amin'ny sensor finday sy ny tahan'ny fo
Fitaovana hanoratana ny fampihetseham-batana rehetra, ary koa ny fampiharana toa azy Samsung Health miaraka amin'ny dikan-6.0 ary ny Google Fit vaovao, amin'ny lamaody ary mihamaro hatrany ireo mpanamboatra izay manatevin-daharana an'io fironana io. Ny iray amin'izy ireo dia ny Huami Amazfit Verge, akanjo azo tsaboina izay miavaka amin'ny fananana NFC ho an'ny fandoavam-bola amin'ny finday sy ny sensor amin'ny tahan'ny fo, izay hahafantaranao ny fahasalamanao amin'ny fotoana rehetra.
Amin'izany fomba izany dia te hanokatra faravodilanitra vaovao i Xiaomi izay hametrahana ny tenany ho iray amin'ireo orinasa hodinihintsika rehefa te hamatsy fitaovana antsika mahavita manondro anay miaraka amin'ny latabatra sary, angona teknika ary famintinana isan'andro, raha miharihary ao amin'ny vatantsika izany sakafo sy fampiharana isan'andro isan'andro izay ataontsika izany.
Ny fepetra voafaritry ny Huami Amazfit Verge
Na dia tena miatrika famantaranandro marani-tsaina aza isika izay mampiavaka azy Efijery 1,3-inch, ny teknolojia AMOLED eo amin'ny tontonana sy ny vahaolana izay mahatratra 360 x 360 teboka. Izany hoe, mijery famantaranandro iray izay toa tsara be isika mandritra ny tontolo andro, mba tsy hialokaloka amin'ny tanantsika amin'ny hazavana mivantana.
Ny iray amin'ireo antsipiriany ara-batana amin'ny Huami Amazfit Verge dia ny tontolony izay mahatratra 43 milimetatra ny savaivony. Tsy maintsy manana fiarovana Corning Gorlla Glass 3 sy fonosana oleophobic isika hisorohana ireo tasy.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, manana fifandraisana NFC ho an'ny fandoavam-bola amin'ny finday izahay, ny sensor amin'ny tahan'ny fo ho mpanelanelana ireo famantarana lehibe sy karazana sensor hafa toy ny geomagnetika sy tsindry. Amin'ny fifandraisana dia hitantsika ihany koa ny Bluetooth 4.0+ BLE sy ny fifandraisany WiFI.
Ny iray amin'ireo angon-drakitra manan-danja amin'ny famaritana azy dia ny batterie izay, raha ny filazan'i Xiaomi, dia mety hahatratra dimy andro fampiasana. Mikasika ny «hardware», puce dual-core amin'ny 1,2GHz amin'ny hafainganan'ny core, RAM 512MB sy 4GB fitehirizana anatiny izay tsy ratsy mihintsy.
Natokana hihazonana ny tonontsika ara-batana
Miaraka amin'ireo rehetra ireo fampiharana miha sarotra ary izany dia mahavita manao famintinana tena lehibe amin'ny fahasalamantsika, ny fiambenana vaovao Huami Amazfit Verge dia fanampim-baovao vaovao amin'ny tsenan'ny akanjo azo ampiasaina. Ary tsy tokony hohadinointsika koa ny GPS + GLONASS sy ny maody fanatanjahantena 11, ary koa ny Xiao Assistant, mpanampy manokana an'ny marika sinoa ahafahanao mankafy ny hatsarana isan'andro isan'andro.
Ary lojika, eo alohan'ny Xiaomi, mihena ihany koa ny vidiny. Ho valiny, ny Huami Amazfit Verge dia manodidina ny 120 euro. Raha nividy azy tany Chine izahay, dia 799 yuan no anananao. Famantaranandro marani-tsaina izay azo vidiana amin'ny loko roa: manga sy mainty. Ny hany zavatra tsy fantatsika dia raha ho tonga amin'ireo faritra ireo izy, satria amin'izao fotoana izao dia toa hijanona ao Shina mandritra ny fotoana kelikely.
Xiaomi tianao mandehana amin'ny fiaran-dalamby gadget manatsara ny endrika ara-batana, na dia efa nanisa sahady teo ambanin'ny fehikibony aza niaraka tamin'ny tarika Xiami Mi Band-ny tena mahomby. Betsaka ny mampiseho fahalianana amin'ity karazana fitaovana ity toa ny Samsung, Huawei ary Apple.
Raha miandry Xiaomi hafa mitafy akanjo sarotra kokoa ianao noho ny Xiaomi Mi Band, ny famantaranandro Huami Amazfit Verge dia fahombiazana. Na dia efa nilaza aza aho dia tsy maintsy miandry kely ianao vao afaka mividy azy amin'ny iray amin'ireo fivarotana ao Espana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Tonga ilay fiambenana Xiaomi vaovao miaraka amin'ny NFC, sensor amin'ny tahan'ny fo ary maro hafa